Timaha dharka gaaban
Quruxda haweenka Daryeelka Timaha
Miisaanka gaaban oo dhaadheer ayaa muddo dheer si fiican u qaata meeshana ma aha oo kaliya ragga, laakiin sidoo kale in haweenka ee fashion. Haddii timo gaaban oo hore loo yiqiin sida ragga, inta badan laga bilaabo bilawgii qarnigii siddeedaad, dhar gaaban oo dhar gaaban ayaa sidoo kale bilaabantay.
Aasaasaha haweenka dharka ah ee timaha gaaban ayaa ah mid aan la dabooli karin oo geesinimo leh Coco Chanel, oo ahaa mid ka mid ah tii ugu horeysay ee lagu soo bandhigo timaha gaaban ee haweenka ugu gaaban, iyada oo dadku sidan oo kale ku dheehantahay, sidaas awgeedna waxay cadeyneysaa xoriyadeeda.
Sida laga soo xigtey sheekooyinka, mademoiselle weyn ayaa qallajisay qayb ka mid ah timaheeda markii ay ogolaan lahayd, sidaas darteed waxay go'aansatay in ay samayso timo gaaban. Dhammaan gabdhihii oo dhan waxay soo qaadatay qaabkan aad u qurux badan wakhtiyadaas, isku dayaya in ay ku daydaan fashionista.
Sidoo kale, inta lagu jiro mid ka mid ah moodyad muujinaysa in 1908, dhammaan moodooyinka ayaa tagay podium leh timo gaaban oo aad u yar, taas oo sidoo kale siiyey dhiirigelinta this style of timo. Kadib, dhibaatada ugu weyn ee dhammaan timo-jarayaashu waxay ahayd xulashada shakhsiga ee dhererka ugu wanaagsan iyo qaabka timaha loogu talagalay nooc kasta oo wejiga macmiilka, madaama gaabnaanta gaaban iyo dheerba ay ku habboon yihiin macaamiisha oo leh muraayado qumman oo qumman oo xoojiyay dhammaan cilladaha. Dhibaatadan ayaa lagu xalliyay iyadoo loo mahadcelinayo maqnaashaha khafiifinta, taas oo gacan ka gaysatay sayidyadeeda inay siiyaan maro fudud oo fudud iyo isla mar ahaantaana si siman u bixiya khadadka cad, siin timo iyo mug weyn.
Hase yeeshee, dabcan, timo gaaban ayaa helay faa'iidada ugu weyn ee ay ka heshay qaabka qaabka Twiggy iyo timo-jaraha Vidal Sassoon, oo abuuray muraayadda ugu caansan, taas oo markii danbe loo yaqaan magaciisa iyo qaabka "casriga". Xajka timahaan, muhiimadda ugu weyn ayaa la geliyay qurxinta indhaha gabadha, taas oo laga arki karo timaha.
Dabcan, tan iyo maalmaha Coco Chanel iyo bartamihii lixaadyadu aad ayay u badaleen moodada, laakiin xitaa hadda timaha haweenka ugu gaaban waa dad caan ah. Hadda waxaad si xor ah u tijaabin kartaa qaabka iyo timaarka dhaadheer, dooro habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay timaha dharka, taas oo siin karta timo wax saameyn ah - laga bilaabo muraayad isku dhejisan si aan kor u qaadin, shoog cabsi badan oo timo madaxa ah. Inta badan, timaha waxaa la gooyaa gaaban oo kala googoynaya iyo timo ballaaran, taas oo ka caawisa yareynta culeyska timaha iyo waxay siinaysaa fursad madaxa timaha si fudud loo nadiifiyo.
Marka aad dooratid timo gaaban, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo sifooyinkaaga shakhsiyaadka wajiga wajiga - tusaale ahaan, si loo abuuro wajiga wajiga muraayadda, dumarku waxay u baahan yihiin inay timo qalafsan ku timaado timaha hareeraha, taas oo si muuqata u fidisa wejiga wajiga, iyo timashadaan waxay ku haboonaan doonaan gabdhaha qaabka wadnaha. Gabdhaha oo leh qaab muuqaal ah oo wajiga ah, timo gaaban oo leh dhar adag oo dhinacyo badan leh iyo boogo qaro weyn ah ayaa ku habboon, taas oo aragti ahaan soo gaabisa wejiga dhinacyada iyo "jarista" xagga sare. Hagaag, gabdhaha leh habboonaanta, qaababka caadiga ah iyo wejiga wajiga ayaa ku haboon inta badan haweenka dhar gaaban ee ugu gaaban - ka timo timo "wiilka hoostiisa" ilaa "bean".
Markaad timo gaaban timo gaaban, waxaad soo qaadan kartaa doodo badan, laakiin weli ka hor intaan timo si aad ula tashato xirfadleyaasha kiiskan - qaabeeyayaasha iyo timo jarista. Sidoo kale, waxaa jira barnaamijyo kombuyuutar oo khaas ah oo kaa caawin doona sameynta timo habboon oo loogu talagalay noocaaga shakhsi ahaaneed iyo muuqaalada kale, dooro dhererka ugu wanaagsan ee timaha, muuqaalkiisa, habka ugu wanaagsan ee loo dhigo oo loo qariyo dhammaan cilladaha iyo falanqaynta faa'iidooyinka.
Nalalka guriga: sida si habboon u sharaxan timaha leh hydrogen peroxide
Cuntada timaha timaha: Cunnooyinka lagu yareeyo guriga
10 Tallaabooyin caafimaad leh iyo qurux leh timo
Sidee si habboon u daryeeli kartaa timo xiiran: 4 qarsoodi ah Kim Basinger
Timo dheer sida loo koro
Miisaanka qoyan ee timaha - dammaanad ah qurux iyo caafimaad
Faalooyinka timaha leh fitamiinada: cuntada wanaagsan ee guriga
Dharka quruxda badan eeyaha
Victoria Bonya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sababta dhabta ah ee looga hortagi karo Alex Smerfit
Xisaabinta arooska arooska
Saladh salad ah oo laga sameeyo kalluunka
Sida loo doorto buugaagta carruurta
Sidee loo go'aamiyaa gacanta, da'da da'dee qofka dhinto: casharrada chiromancy
Dorado la dubay liin
Cimilada ugu caansan Hollywoodka
Vika Daineko: "Marnaba wax xun maaha ..."
Sidee loola dhaqmaa naceybka hooyo ee ku saabsan barbaarinta ilmaha?
Shiine ah Crine Crested
Koktail "Mai Tai"
Salad leh dabocase, jiiska iyo jiiska